Amaqiniso Wokusetshenziswa Kwamaselula e-Senior Citizen, Amanani, Nezibalo | Martech Zone
I-infographic: Izibalo Zokusebenzisa Zeselula ze-Senior Citizen
NgoLwesibili, ngoJulayi 30, i-2019 NgoLwesibili, ngoJulayi 30, i-2019 UNikola Djordjevic
Inkolelo yokuthi asebekhulile abangakwazi ukuyisebenzisa, abayiqondi, noma abafuni ukuchitha isikhathi ku-inthanethi isabalele emphakathini wethu. Nokho, ingabe kusekelwe emaqinisweni? Kuyiqiniso ukuthi ama-Millennials alawula ukusetshenziswa kwe-Intanethi, kepha ngabe kukhona ngempela lokho okumbalwa kwamaBaby Boomers kuwebhu ebanzi emhlabeni?
Asicabangi kanjalo futhi sesizokufakazela lokho. Abantu abadala bamukela futhi basebenzise ubuchwepheshe besimanje ngamanani andayo kulezi zinsuku. Babona izinzuzo zokufunda ukusebenzisa ama-laptops, ama-smartphones, kanye ne-dab empeleni engokoqobo.
Nawa amanye amaqiniso akhombisa ukuthi iqiniso lokuthi izizukulwane ezindala emphakathini wanamuhla zisebenzisa kanjani i-Intanethi.
Zingaki futhi Zingakanani
Inani labantu abadala ku-Intanethi empeleni liphezulu impela. Okungukuthi, okungenani ama-70% abantu abaneminyaka engu-65 nangaphezulu bachitha isikhathi esithile online nsuku zonke.
Ngokwesilinganiso, isizukulwane esidala sichitha cishe amahora angama-27 online online ngesonto.
Abezonline.org, Asebekhulile & Iwebhu Yomhlaba Wonke
Ngaphezu kwalokho, asebekhulile bathole inzuzo enkulu kakhulu ye-Intanethi — ukufinyelela mahhala kulwazi olungenamkhawulo! Ngakho-ke, ucwaningo lukhombisa ukuthi okungenani Abantu abadala abangama-82% basebenzisa izinjini zokusesha ukuthola imininingwane ngezihloko abazithandayo.
Iningi Labantu Abadala Lihlola Isimo Sezulu
Esinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani asebekhulile bangena kwi-inthanethi ukuhlola isimo sezulu (cishe ama-66%). Kuyiqiniso elaziwayo ukuthi lapho ukhula uthola ukuzwela kakhudlwana uba nezinguquko ngokungazelelwe ezimweni zezulu, ngakho-ke ukuyihlola online kuyindlela enhle yokuhlala uzilungiselele.
Kodwa-ke, abantu asebekhulile basebenzisa i-Intanethi ukuthola ezinye izinto eziningi. Ezinye zezinto ezivame kakhulu kufaka phakathi ukuthenga, imininingwane ephathelene nokudla, imidlalo, amakhuphoni nezaphulelo, nezinye izizathu eziningi.
Ingabe Abantu Abadala Bayakhuluma Nge-Intanethi?
Okunye ukuqagela esinakho ngabantu asebekhulile abasizungezile ukuthi basathembele ezintanjeni zangasese ukuxhumana nabangane nemindeni yabo. Yize lokho kuyiqiniso kwabanye, akusakazeki njengoba abanye bengacabanga.
Izindlela ezintathu eziyinhloko zokuxhumana kwi-Intanethi ngama-imeyili, izinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo nezinkundla zokuxhumana. Cishe ama-75% abantu asebekhulile baxhumana namalungu emindeni yabo besebenzisa okungenani uhlelo lokusebenza olulodwa lwemiyalezo. Lezi ezimbili ezivame kakhulu yi-FaceTime ne-Skype ngoba lokhu kwenza kube lula ukuxhumana nevidiyo nokuthumela izithombe.
Yimaphi Amadivayisi Asetshenziswa Kakhulu?
Yize sesihambe ibanga elide ekuhlanganiseni asebekhulile kanye nobuchwepheshe, kodwa kusekhona isikhala sokwenza ngcono. Isibonelo, omakhalekhukhwini abajwayelekile basavame kakhulu kwizizukulwane ezindala uma kuqhathaniswa nama-smartphones. Ngokuya phezulu kwesilinganiso seminyaka, kukhula igebe phakathi kokusetshenziswa komakhalekhukhwini nama-smartphone.
Isibonelo, ama-95% abantu abaneminyaka engama-65-69 basebenzisa omakhalekhukhwini, kanti ama-59% asebenzisa ama-smartphones. Noma kunjalo, Ama-58% alabo abaneminyaka engaphezu kwengu-80 basebenzisa omakhalekhukhwini, kepha bangu-17% kuphela abasebenzisa ama-smartphones. Kubukeka sengathi ama-smartphones asesabisa abantu asebekhulile, kepha lezi zindlela zizoshintsha maduzane.
Lezi zinombolo Kulindeleke Zikhule Ngokuzayo
Izinombolo ezihlobene ne-Intanethi kanye nabantu abadala ziyakhuthaza kakhulu vele. Kodwa-ke, kulindeleke ukuthi zikhule ngokushesha kungekudala. Njengoba izizukulwane ezisencane esevele zinomyalo omuhle wobuchwepheshe besimanje ziguga, iphesenti labadala abafundile kwezobuchwepheshe lizokhula futhi.
Ukuqonda okwengeziwe ngalesi sihloko, hlola okulandelayo kwe-infographic eyenzelwe ngu UMedalerthelp.
Tags: ukusetshenziswa kwe-inthanethiizibalo zeselulaukusetshenziswa kweselulaizakhamuzi eziphakeme
Nikola Djordjevic, MD, Inhloko Yokuqukethwe ku CengiNobuEs.org. Uqhamuka eSerbia, uNikola ungudokotela wezokwelapha oqale le phrojekthi e2018 ngenxa yentshisekelo yakhe yokusiza abanye, ikakhulukazi abadala. Ngaphandle kokubuyekeza izinhlelo zokuxwayisa ngezokwelapha, ubhala nebhulogi enikezelwe kwezempilo, ukuguga, ukuthatha umhlalaphansi, nezinye izihloko ezihlobene nabadala.